DEG-DEG: Barcelona Iyo Inter Milan Oo Heshiis Buuxa Ka Gaadhay Mid Ka Mid Ah Xiddigihii Uu Ronald Koeman Ka Caydhinayay Camp Nou – Laacibnet.net
DEG-DEG: Barcelona Iyo Inter Milan Oo Heshiis Buuxa Ka Gaadhay Mid Ka Mid Ah Xiddigihii Uu Ronald Koeman Ka Caydhinayay Camp Nou
Barcelona ayaa ogolaatay in mid ka mid ah laacibiintii uu tababaraheeda cusube ee Ronald Koeman uu u sheegay inay iskaga tagaan Camp Nou uu u wareego naadiga Inter Milan oo la sheegay inay heshiis rasmi ah wada gaadheen.
Arturo Vidal, Luis Suarez, Ivan Rakitic iyo Samuel Umtiti ayuu Koeman telefoonka kala hadlay markii uu xilka tababarenimo qabtay, waxaanu ku wargeliyey inay raadsanaan naadiyadii ay u ciyaari lahaayeen, isagana aanay ugu jirin qorshaha.
Tababaraha reer Netherlands waxa uu markiiba arkay Rakitic oo kooxda ka baxaya, si fiicanna ugu hoggaansamay amarka, waxaanu kubbad-sameeyaha reer Croatia ku laabtay Sevilla oo uu lix sannadood ka hor uga soo wareegay Barcelona.
Luis Suarez iyo Arturo Vidal ayaa iyagana ay ka taagnayd hadal haynta ugu badan malmahan, waxaana labadoodaba la sheegay inay heshiisyo shaqsi ah la gaadheen labada kooxood ee Talyaaniga ah ee Juventus iyo Inter Milan, inkasta oo Suarez ay xaaladdiisu ka beddelan tahay oo Barcelona ay doonayso hadda inay sii haysato.
Sida ay sheegtay idaacadda RAC1 ee fadhigeedu yahay waddanka Spain, Barcelona iyo Inter Milan waxay heshiis buuxa ka gaadheen madaalaha khadka dhexe ee Vidal oo u wareegaya Inter Milan oo heshiis laba sannadood ah u saxeexayo.
Idaacaddu waxay intaa ku dartay inay Inter Milan bixin doonto 0.5 milyan oo Euro (Milyan badhkii) oo kaash ah iyo lacago aan intaas ka badnayn oo ku xidhan bandhig ciyaareedkiisa, isla markaana uu Salaasada maanta tijaabada caafimaadka u mari doono kooxda Talyaaniga ah.
Maalmo ka hor ayuu Arturo Vidal heshiis shaqsi ah lasii galay Inter Milan, kaas oo kaliya ku koobnaa isfaham afeed oo aan loo beddelin qoraal illaa inta ogolaanshaha laga helayo, waxaana marka uu tijaabada caafimaadka ka gudbo uu qalinka ku duugi doonaa sannad heshiis ah oo uu ku qaadan doono 3 milyan oo Euro iyo sannad labaad oo doorasho ah oo uu isagu go’aankiisa yeelanayo.
Vidal ayaa Barcelona uga soo wareegay Bayern Munich, waxaanu qayb ka ahaa laacibiintii saftay ciyaartii ugu dambaysay ee bahdilku kasoo gaadhay ee Bayern ay 8-2 ku xasuuqday.